Aluminium Chromium Daawaha, Al-Cr - Goodao Technology Co., Ltd.
Aluminium chromium alloy CrAl
Sida nooc ka mid ah heerkulka sare iyo walxaha u adkaysta, aluminium chromium aluminium budada ah CrAl ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dusha sare, dahaadhka birta iyo qaybaha kale ee isku dhafka heerkulka sare, dhoobada, iwm. waxaa loo isticmaali karaa sida qalab gaashaan, wax nuugid, qalab daboolid iyo si ballaaran loogu adeegsado aerospace, militariga iyo meelaha kale ee tiknoolajiyada sare.
Aluminium chromium alloy CrAl sidoo kale waa daawaha korantada muhiimka ah. Xaddiga badan ee Cr iyo Al ee halabuurka ku jira, filim cufan leh oo oksaydh ah ayaa laga samayn doonaa dusha sare ee aaladda oo leh heerkul sarreeya, taas oo dheereyn doonta nolosha adeegga alaabada isku-dhafan. Waxyaabaha sare ee Al ayaa sidoo kale hagaajin kara adkeysiga, si wax ku ool ah ugu beddelaya tamarta korantada tamarta kuleylka, iyo keydinta qalabka kuleylka korontada.
Aluminium chromium alloy CrAl wuxuu leeyahay iska caabin qiiqa heerkulka sare iyo iska caabin sare, taas oo si ballaaran loogu isticmaali karo sifeynta gaaska heerkulka sare, gubida iyo shaabada gaaska.
Hore: Aluminium Cobalt daawaha, Al-Co
Xiga: Is-dilidda Tungsten, WSi2
Daawaha Aluminium ee Chromium
Warshadaha Daawaha Aluminium ee Chromium
Warshadda Daawaha Aluminium ee Chromium
Soo-saaraha Daawaha Aluminium ee Chromium
Soosaarayaasha Daawaha Aluminium ee Chromium
Qiimaha Daawaha Aluminium ee Chromium
Xigashooyinka Daawaha Aluminium ee Chromium